I-Esperto Di Semalt Specifica Le Ragioni Urgenti Per Ottenere Recensioni Dai Clienti
Ukuncintisana kwamakhasimende enkampanini yebhizinisi e-intanethi iyaqhubeka nokuqinangosuku. Izinkampani kuphela eziye zafaka amasu okuthengisa kahle zingaphumelela ekutholeni amakhasimende amaningi. Enye yezinto ezinhle kakhuluizindlela zokubeka ibhizinisi lakho empumelelweni ngokuhlanganisa izibuyekezo eziningi kusuka kumakhasimende ngangokunokwenzeka.
Amabhizinisi aphumelele kunawo wonke emhlabeni anethani lokubuyekeza, kokubili okuhlefuthi engalungile, ithunyelwe ku-intanethi. Basiza amakhasimende amasha ukuthola umbono ocacile ngomkhiqizo noma isevisi futhi anqume ukuthi uyothenga yininoma uqhubekele kumhlinzeki olandelayo.
Embonini yezokuvakasha nezokungenisa izihambi, basiza izivakashi ukwazi ukuthi yimaphi amahhotelakanye nezindawo zokudla ukuze udle kanye nezindawo ezikhangayo zokuvakashela - server installation service.
Nazi izizathu ezine ezichazwe ngu-Ivan Konovalov, isazi esiholela phambili i-Semalt , kungani ukubuyekezwa kubalulekile ebhizinisini:
1. Yakha ukwethemba nokwethembeka
Ngaphezu kwezingu-68% zeminyaka eyizinkulungwane zeminyaka bathemba ukubuyekezwa kwe-intanethi ukubasiza ukuba benze ukuthenga okulungile izinqumo njengokuthunyelwe kuma-34% abalwa ekukhangiseni kwethelevishini lapho bethenga. Lezi zibalo zisho ukuthi ukubuyekezwa okuningi onakhoithunyelwe ku-intanethi kumapulatifomu ahlukahlukene njenge-Yelp, iphakamisa amathuba akho okuguqula amathenda ekuthengeni amakhasimende.
2. Ukwandisa amazinga okuthengisa nokuguqulwa kwesayithi
Yebo, ukuthenga iziqondiso kanye nezincazelo zomkhiqizo kungasiza ibhizinisi lakho likhule, kodwa ungakwazithola imiphumela eminingi ngokubukeza kwamakhasimende wangempela wemikhiqizo yakho, amasevisi, noma inkampani ngokujwayelekile. Izifundo zibonisa ukuthi ikhasimende elithembekileubufakazi buholela ekukhuleni kuka-18% ekuthengiseni.
Imibiko nayo yembula ukuthi amaklayenti athatha isikhathi sokufunda umkhiqizo owenziwe ngumsebenzisinoma ukubuyekezwa kwenkonzo kubonisa izinga lokuguqulwa eliphakeme lika-133%. Isizathu esiyinhloko salezi zibalo ukuthi ukubuyekezwa kwabathengi kunokwethenjelwa Izikhathi ezingu-12 ngaphezu kwezincazelo zemikhiqizo ezishicilelwe ku-inthanethi ngabakhiqizi.
3. Ukwandisa Ukuqwashiswa Komkhiqizo
Ukuncintisana ngempumelelo nezinye izinkampani ezihlinzeka ngemikhiqizo namasevisi afanayo, udinga ukuza ngezindlela zokudala i-buzz nokuqhubeka nokwandisa ukuqwashisa komkhiqizo. Ukubuyekezwa okunembile kuzoveza okuhle isithombe senkampani yakho kumakhasimende.
Ngakolunye uhlangothi, izibuyekezo ezingalungile uma ziphendulwa ngokuzikhandla zizokwenza i-buzz enhle kakhulu eduze nomkhiqizo wakho ongakwazi ukuyisebenzisa ukuze ukhiqize ukuthengisa okuningi nokukhulisa ukuqwashisa komkhiqizo. Esikhundleni sokungazinaki nomaukususa ukubuyekezwa okungalungile, kufanele uphendule ngokufanele kubo. Isibonelo, cela i-poster ukuthi ixhumane neqembu lokusekela futhiunikeze izixazululo zenkinga. Lapho le nkinga ixazululwe, cela umaphosta ukuthi uphendule emazwini akhe ukukhombisa amanye amaklayenti angenzekaukuthi unendaba ngamakhasimende akho futhi uzimisele ukwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi bathola inani lemali.
4. Nika isandla ku-Google usezingeni
Yonke inkampani ene-website isebenza ngokungakhathali ukuze ibhalwe ohlwini lokuqalaikhasi lekhasi lemiphumela yokusesha injini. Iningi le-SEO ochwepheshe kusukela ku-Semalt lombono wokuthi ukubuyekezwa kunomthelela ku-10% we-Google usezingeni.Uma ukubuyekezwa kwakho okuvela kumakhasimende, kuphakamisa amathuba akho wokuthola izinga eliphezulu kuma-SERP.
Ukubuyekeza kubalulekile ebhizinisini lakho. Khuthaza amakhasimende ukuthi ashiye impendulo ukuhlinzeka ngokugqugquzela njengezephulelo ekuthengeni kwabo okulandelayo.